Qoyska reer Elman oo dalbaday baarista dilkii gabadhooda inay dowlada Canada qayb ka noqoto - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Qoyska reer Elman oo dalbaday baarista dilkii gabadhooda inay dowlada Canada qayb ka noqoto
Qoyska reer Elman oo dalbaday baarista dilkii gabadhooda inay dowlada Canada qayb ka noqoto
November 24, 2019 Duceysane461
War murtiyeed ka soo baxay Qoyska Almaas Elman ayaa looga hadlay dhacdadii 20-kii bishan lagu dilay iyo sida qoyskooda ay uga niyad jabeen geerida Almaas, waxaana ay dalbadeen in aan laga hor-dhicin baaritaanka.
Qoyska ayaa sheegay in aanay aheyn markii u horeysay oo soo gaarta musiibo tan oo kale ah, 20-sano ka hor ayaa sidan oo kale waxaa Muqdisho loogu dilay aabahood Elman Cali Axmed oo u ololeynayay nabadda iyo waxbarashada.
War murtiyeedka ka soo baxay qoyska reer Elman ayaa lagu codsaday in si buuxda loo baaro dilkii Almaas, isla markaana in si wadajir ah ay u baaraan dowladaha Soomaaliya iyo Canada, maadaama Almaas ay heysatay labo dhalasho.
Warmurtiteed ku saabsan Dilkii Almaas Elman kana soo baxay Qoyska Reer Elman Cali Axmed & Reer Xirsi Cabdulkhadir.
“Dhab ahaantii waxaannu ku jirraa xilli aannu aad uga qalbi-jabannahay geeridii aan xanuunkeeda ciduna qiyaasi karin oo ku timid walaasheen, xaaskii iyo gabadhii aannu dhallnay ee Almaas Elman. Waxaannu dareemaynaa cidlo aan abid ciduna inoo buuxin karin.
Almaas waxay lahayd ruux ifaysa, bilic-san berina ka ahayd musiibada ay la kulantay. Runtii waa ay laqmatay, in ay xaamilo ahaydna waa mid sii kordhinaysa murugadaan naga daaddegi la’.
Taageerada, is barbartaagga iyo tacsiyeynta inooga timid daafaha dunida oo dhan aad ayay inoo khushuuc geliyeen. In aannu ogaanno in Almaas aad loo jeclaa aanay si togan uga qayb-qaadatay nolosha dad badan ayaa qoyskayaga qaddar laab-riixasho ah siinaysa waqtigan aadka inoogu adag.
Aad baannu uga mahad-celinaynaa baroor-diiqda Almaas iyo xusuus sheegiddeeda dunida oo dhan ka dhacaysa, waxaannuna doonaynaa in aannu ku biirro xuska nolosheedii aadka u qaniga ahayd.
Maahan markii ugu horreysay ee qoyskeenna ay haleesho musiibo qalalaase wadata oo tan oo kale ah. Qalalaase la mid ah midkan ay Almaas ku baxday oo isla magaaladan ka dhacay ayaannu sanado ka hor ku weynay aabbeheen Elman Cali Axmed.
Taa ayaa sii laballaabaysa murugada iyo qarracanka aannu wajahayno, hase yeeshee marna musiibooyinkani shiiqin maayaan go’aankeenna ah in aannu dhisno nabad qoysaska kale ee Soomaaliyeed ka hor joogsata in ay la soo deristo murugo la mid ah midda aannu haatan dhex maquuranayno.
Waxaannu weli si aan leex-leexad lahayn ugu jeebban nahay gaaridda Soomaaliya ay dadkeedu ku nool yihiin xaalad aysan ka cabsi qabin in ay musiibo tan la mid ahi ku dhacdo gacalka iyo xigaalkooda.
War kasta oo haatan laga soo saaro duruufihii ay Almaas ku geeriyootay waa kuwo laga hor-dhacay, mana noqon doonaan kuwo caawiya qoyskeenna. Wararkaa waxaa ka mid noqon kara in laysla dhex meero suuraggalnimada in ay Almaas dishay “xabbad wiifto” ah.
Waxaannu jeclaan lahayn in dilkii Almaas si buuxda loo baaro, waxaannuna codsanaynaa in ay dawladaha Soomaaliya iyo Canada si wadajir ah oo qoto dheer arrintan u baaraan, maadaama ay laheyd labada dhalasho ee labada dal.
Intii laga gaarayo hannaankaa hufan oo dhamaystiran waxaannu dalbanaynaa in aanay qof iyo maamul toona ka faalloon arrintaan meel gaar ahna aanay ku tirin.
Waxaannu ka war haynaa in la faafiyey muuqaallo iyo mu’aamarado aan sal lahayn. Muuqaalladaa iyo mu’aamaradahaasi waa kuwo qoyskeenna sii xanuunjinaya waqtigan adag. Sidaa darteed in la joojiyo iyo dib loo saxo ayaannu codsanaynaa.
Kani waa warka keliya ee aannu musiibadan haatan ka soo saarayno, waxaannuna si xushmad leh u dalbanaynaa in ay dadku ixtiraamaan asturnaanta axwaasha qoyskeenna, si aannu si nabdoon ugu murugoonno.
Almaas waxaa ay ka tagtay guud ahaan dalkeedda iyo dadkeedda, gaar ahaana Qoyskeeda oo ka kooban, hooyadeed Fartuun Cabdisalaan Xaaji Aadan, walaaleheed Ilwaad Elman, Iimaan Elman iyo Geesiya Elman, saygeedii Sakariya Xirsi iyo Almaas waxa ay innooga tagtay raad taariikheed aad u sareeya oo ku saabsan is beddel togan oo ka dhaca Soomaaliya, Afrika iyo Dunidaba.”
Madasha Xisbiyada Qaran oo war-saxaafadeed kasoo saartay xadgudubyada ciidamada itoobiya ee gobolka Gedo
Guddigii diyaarinta sharciga doorashooyinka oo Guddoonka Baarlamaanka u gudbiyay Sharciga doorashooyinka
Facebook oo isku dhex dareysa WhatsApp, Instagram iyo Messenger
January 26, 2019 January 26, 2019 Cali Yare
Wariye loo magacaabay Gudoomiye Degmo
December 31, 2018 Cali Yare
Tirsigii 62aad ee Wargeyska Gobollada Dhexe Bisha May 2018